	Mana Barumsaa Sadarkaa Addunyaarratti Qulqullinna qabu dhalootaaf hundeessuu. 	Qulqullinna barnootaa, Afaan Oromootiif Ingiliziin Mirkanaahe Sabaaf Dhiheessuu. 	Barattoota sadarkaa Addunyaa irratti dorgomaa ta'uu danda'anu Oomshuu. 	Barnoota karrikulamii Addunyaawaaf ka Biyya keessaatiin barsiisuu. 	Xiyyeeffannaan keenyaa barattoonni keenya akka waa uumanii sadarkaa Addunyaatiif gumaachanu gochuu, Afaaniif, Aadaa ofii beekanuu, akkasumas ittiin baratanu gochuu. 	Barattoonni keenya akka Addunyaan waligalanu Afaan Oromoo, Englizii, Spaanishiif French akka sirritti baratanii dubatanuu fi itti hojjatanu barsiisuu. 	Karrikulamii hojjachuun barnoota sirna Gadaa Kutaa tokkoffaa irraa jalqannee barsiifna. 	Barnoota fayyaa akka barataan dhibeerraa ofi dandamachiisan kutaa torbaffaa irraa kaanee barsiifna. 	Kompiyuutera KutaaTokkoffaa irraa kaanee barsiifna. 	Gatii Kafaltii mana barnootaa kagalii maatii giddu gala godhate dhiheesina. 	Barattoota harka qaldheeyyiifi barnoota tolaa ni kennina, akkasumas barattoota sadarkaa tokkoffaa bahanuuf carraa barnoota biyya keessaaf biyya alaa ni mijeesinaaf. 	Kana milkeessuuf dhaabbilee Motummaafi mit-Motummaa waliin sadarkaa biyya keessaafi biyya alaa hariiroo in uumna.